Sheekada Saami qaybsiga iyo xalkeeda | Berberanews.com
Home QORMOOYIN Sheekada Saami qaybsiga iyo xalkeeda
Sheekada Saami qaybsiga iyo xalkeeda
Dooda saami qaybsiga xubnaha golaha wakiilada waxay u baahantay si dhab ah oo cilmiyaysan in loo lafaguro dabadeedna go’aan ama qiyaas cadaalad ku dhisan lagu saleeyo oo aanay noqon beelaysi iyo olole damac ku jiro ee ay noqoto nidaam iyo habraac siman.
Sida qudha ee saami qaybsi xaq ah loo samaynkaraa waa iyadoo TIROKOOB GUUD la sameeyo oo weliba la adeegsanayo farsamada sawirka INDHAHA iyo FARAHA oo wada socda si aan loo been abuurin.Ta kale waa dhaqaalaha ama cashuurta kasoo baxda gobol kasta xisaabta lagu daraa.
Hadaba ilaa iminka xukuumadii Somaliland ee kala dambeeyay wey ku fashilmeen inay sameeyaan TIRAKOOB GUUD oo waxa qudha ee miiska yaalaa waa heshiiskii meel-ku-gaadhka ahaa ee lagu galay doorashadii ugu horeysay ee ku salaysnayd doorashooyinkii 1967 oo 2.5 lagu dhuftay.Ilaa intaTIRKOOB GUUD la samaynayona taas ayaa ina xukunta.
Hadaba waxa waajib ah in laga hawlgalo sidii TIRAKOOB GUUD loo samayn lahaa sida ugu dhakhsaha badan, uguna macquulsan. Taaso loo adeegsanayo farsamada sawirka INDHAHA IYO FARAHA si aanb eern abuur u dhicin.
Waxa kaloo loo baahanyay inaan CARUURTA AAN QAAN GAADHIN loo ogolaan inay codeeyaan iyadoo la adeegsanayo TIRAKOOBKA GUUD.
Hadaba waxa jira gobolo ku doodaya in codaynta lagu sameeyo doorashadii xaaraanta ahayd ee bilaa diiwaangelinta ahayd ee intii la doono lagu noqnoqonayay!!?? Taasi ma noqon karto qiyaas loomana cuskankaro saami qaybsi cadaalad ku dhisan, waayo waxay ahayd doorasho bilaa diiwaangelin ah oo codaynta tobanaan jeer lagu noqnonaayay, oo caruurtaa codaynaysay, oo warqadaha codaynta layskaga shubanayay. Waxay ahayd codayn xaaraan ah oo ninkii qabyaalada iyo tuugada ku dheer uu cod badan oo aanu xaq u lahayn qaatay.Markaa doorashadaa cidina kuma heshiin in laga dhigo qiyaas codaynta saami qaybsi lagu xisaabtamo.
Waxa ilaa iminka taagan saami qaybsigii hore loogu heshiiyay ee ku dhisnaa 1967, inkastoo aan taa si fiican loo dabiqin oo gobolada qaar aan la siin wixii usoo baxay, sida gobolka Saaxil oo 1967 lahaan jiray 5 xildhibaan oo marka lagu dhufto 2.5 at usoo baxayso 12.5 xildhibaan. Iminkana waxay haystaan 10 xildjibaan, halka Burco oo la mid ahayd la siiyay 15 xildhibaan iyadoo xaq u lahayd 2.5 xildhibaan lahayd, sidaana waxa ku dheeraad ah 2.5 xildhibaan oo Berbera looga qaaday.iyadoon wax sabab ah jirin!
Written by Abdirsaaq
Previous articleWasiir-ku-xigeenka Amniga oo raalligelin siiyay Gobolka Sanaag
Next articleMadaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Oo Tababar U Soo Xidhay Dufcaddii 32-aad Ee Ka Qalin-jebisa Dugsiga Tababarka Ciidanka Mandheera Ee Lixle.